Ukufunda Ukubhala Abalingisi baseTshayina ngesandla
Iilwimi Abalingiswa baseTshayina
Ukufunda Ukubhala Abalingisi baseTshayina
Ukufunda ukubhala abalinganiswa baseTshayina yenye yezona zinto zinzima kakhulu zokufunda isiMandarin isiShayina . Kukho amawaka abalinganiswa abahlukeneyo, kwaye indlela yodwa yokuzifunda ngokukhunjulwa kunye nokuqhuba rhoqo.
Kule minyaka yedijithali, kunokwenzeka ukusebenzisa ikhompyuthela ukubhala abalingiswa baseTshayina, kodwa ukufunda ukufunda ukubhala abalinganiswa baseTshayina ngendlela efanelekileyo yokufumana ukuqonda ngokucacileyo kumntu ngamnye.
Nabani owaziyo i- Pinyin angasebenzisa ikhompyutha ukuba abhale abalinganiswa baseTshayina . Ingxaki ngolu hlobo kukuba i-pinyin spellings ibonisa abalinganiswa abaninzi. Ngaphandle kokuba uyazi ukuba yiyiphi impawu oyifunayo, uya kwenza iimpazamo xa usebenzisa ikhompyutha ukuba ubhale abalingiswa baseTshayina.
Ulwazi olungileyo lwabantu baseTshayina yindlela efanelekileyo yokubhala iChina ngokuchanekileyo, kwaye indlela efanelekileyo yokufumana ulwazi lwabalandelayo baseShayina ngokufunda ukubhala ngesandla.
Abalingiswa baseTshayina bangabonakala bengenakuqondakala nabani na abangazi ulwimi, kodwa kukho indlela yokwakha. Umlingisi ngamnye usekelwe kwi-214 radicals - izixhobo ezisisiseko kwinkqubo yokubhala yaseShayina.
Ama-Radicals enza iibhloko zakhiwo zesiTshayina. Amanye ama-radicals angasetyenziselwa kubini izibhloko zokwakha kunye nabalinganiswa abazimeleyo, kodwa ezinye azizisebenzisi ngokuzimela.
Zonke iimpawu zesiTshayina ziquka imivimbo emele ibhalwe phantsi.
Ukufunda umyalelo wokubethelwa yiyona nto ebalulekileyo yokufunda ukubhala abalingiswa baseTshayina. Inani leemivimbo zisetyenziselwa ukuhlukanisa abantu baseTshayina kwizichazi-magama, ngoko ke inzuzo eyongeziweyo yemivalo yokufunda ikwazi ukusebenzisa izichazili zesiTshayina.
Imigaqo ephambili yokumiswa kwesibalo kukuba:
sishiya ngakwesokudla kwaye phezulu ukuya phezulu
engqambileyo phambi kokuma
imivimbo engqambileyo neyobugqwetha idlulela ezinye iintlobo
idiagonal (ngakwesokudla kuya kwesobunxele uze ube ngasekhohlo ukuya kwesokudla)
kwiziko elizenzekelayo kwaye ngaphandle kweedagon
izibetho zangaphandle ngaphambi kokuhlala ngaphakathi
ezishiyekileyo phambi kokuba uvalwe
amachaphaza kunye nemivimbo emincinci
Uyabona umzekelo wendlela yokubethelwa koluhlungu kumzekeliso ophezulu kweli phepha.
Iincwadi zokusebenzela ezilungiselelwe ukubhala ngokuqhelekileyo ziyafumaneka kumazwe aseTshayina, kwaye unokukwazi ukuzifumana ezixekweni kunye nommandla omkhulu waseTshayina . Ezi ncwadi zincwadi zidla ngokubonisa umlinganisi nge-stroke order kunye nokubonelela ngeebhokisi ezenziwe ngokubhala. Zijoliswe kubantwana besikolo kodwa ziluncedo kunoma ubani ofunda ukubhalela abalingisi baseTshayina.
Ukuba awukwazi ukuyifumana incwadi enokwenza oku, unokukhuphela le fayili ye-Microsoft Word kwaye uyiprinte.
Kukho iincwadi ezininzi malunga nokubhala abalingiswa baseTshayina. Enye yezona zinto zibhetele ziyiNtloko yokuBhala kweBantu baseTshayina (isiNgesi) .
Ithini isichazi sesiTshayina?
Injongo Nentsingiselo Yomntu waseTshayina weHama
Ukubaluleka kwezibetho kwiimpawu zesiTshayina
Funda ukuthetha nokubhala "mna" ngesiTshayina
Iiptogragrafu - iimpawu zesiTshayina njengezithombe
Ukubaluleka kweentlanzi kwiilwimi zesiTshayina
Indlela Yokuthetha Nokubhala "Wena" ngesiTshayina
Ukufunda izinto ezisisiseko: Abalinganiswa baseTshayina
Ukubambisana kunye neenyaniso eziyimfuneko
Udlala njani i-Flop Poker
Ubunokwenzeka bokuThatshazwa kweRoyal in Poker
Beyonce Knowles - I-Astrological Portrait
Yiyiphi i-acid Acidest?
Amazwi aseJapan malunga nokuDana
Imfazwe Yehlabathi II: Ukholi-Jikelele uLudwig Beck
I-Stylistics kwi-Applied Linguistics
IHayden Panettiere Ixoxa 'ngeCrazy Princess'
Isikhokelo sokuSindiswa komntu onobuchule
Iingcebiso zokunceda abafundi baseKholeji balele
I-Glossary yoBugcisa: iGraphite
UkuPenda kweLwandle: Ukuqonda oko Uzama ukuPenda